သူမရဲ့မွေးနေ့လေးရောက်လာတော့ သားကိုလွမ်းတဲ့စိတ်ကြောင့် ရင်တွေအစိတ်စိတ်အမွှာမွှာကွဲကြေသလို ခံစားနေရတဲ့ ရေမွန်ရဲ့မိခင် – Shwe Yaung Media
သူမရဲ့မွေးနေ့လေးရောက်လာတော့ သားကိုလွမ်းတဲ့စိတ်ကြောင့် ရင်တွေအစိတ်စိတ်အမွှာမွှာကွဲကြေသလို ခံစားနေရတဲ့ ရေမွန်ရဲ့မိခင်
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. မနေ့ညက အန်တီခင်မြတ်မွန်ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် မွေးနေ့ရောက်တာတောင် သားကိုလွမ်းတဲ့စိတ်ကြောင့် မပျော်ရွှင်နိုင်ဘဲ ရင်တွေအစိတ်စိတ်အမွှာမွှာကွဲကြေသလို ခံစားနေရကြောင်း ရင်ဖွင့်ပြောပြလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဩဂုတ်လ (၁၇) ည (၁၂:၀၀) နာရီ ကျော်ပြီး (၁၈) ရက် ဝင်တာနဲ့ သားဖြစ်သူမှ သူမကို ဖုန်းခေါ်ပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးနေကြဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားတာပါ။
ဒီနှစ်မှာလည်း ခါတိုင်းနှစ်တွေလိုပဲ ဖုန်းများဝင်မလားဆိုပြီး ရူးကြောင်ကြောင်နဲ့ ထိုင်မျှော်နေမိကြောင်းနဲ့ Happy Birthday Mommy ဆိုတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းသီချင်းလေးနဲ့ သူမကို ဦးဦးဖျားဖျားနှုတ်ဆက်လေ့ရှိတဲ့ သားရဲ့ အသံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်ကစပြီး မကြားရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဖြေမဆည်နိုင်အောင် ဝမ်းနည်းနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝထဲကနေ အပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားတဲ့ သားလေးကို တစ်နေ့မှ မေ့မရဘဲ လွမ်းဆွတ်သတိရနေပြီး ရင်တွေ ကွဲကြေနေရသလို ခံစားနေရကြောင်း ရေးသားထားပါသေးတယ်။
ဒီနှစ်မှစပြီး မွေးနေ့ဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်မရှိတော့တဲ့အတွက် ဘာမှလုပ်ဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း ဝမ်းနည်းစွာဖြင့် ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လပြည့်ကဗျာရဲ့ Facebook အကောင့်မှာလည်း တစ်ချိန်က အမေ့ရဲ့မွေးနေ့ကို မိသားစုစုံစုံလင်လင်နဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည်ဝေမျှပြီး ” အရင်လို လူမစုံတော့တဲ့မွေးနေ့မို့ Happy Birthday လို့တော့မပြောတော့ပါဘူးမပျော်ဘူးဆိုတာလဲသိလို့ မေကြီး ကျန်းမာပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးတော့မယ်နော် ” ဆိုပြီး မိခင်ဖြစ်သူကိုမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေလည်း အမှတ်တရအနေနဲ့ ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်စေဖို့ ရေမွန်ရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်း ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
Source and Photo Crd-Lapyae Kabyar’s and Khin Myat Mon’s Facebook Account
သူမရဲ႕ေမြးေန႕ေလးေရာက္လာေတာ့ သားကိုလြမ္းတဲ့စိတ္ေၾကာင့္ ရင္ေတြအစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲေၾကသလို ခံစားေနရတဲ့ ေရမြန္ရဲ႕မိခင္
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ…. မေန႔ညက အန္တီခင္ျမတ္မြန္ရဲ့ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေမြးေန႔ေရာက္တာေတာင္ သားကိုလြမ္းတဲ့စိတ္ေၾကာင့္ မေပ်ာ္ရႊင္နိုင္ဘဲ ရင္ေတြအစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲေၾကသလို ခံစားေနရေၾကာင္း ရင္ဖြင့္ေျပာျပလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဩဂုတ္လ (၁၇) ည (၁၂:၀၀) နာရီ ေက်ာ္ၿပီး (၁၈) ရက္ ဝင္တာနဲ႔ သားျဖစ္သူမွ သူမကို ဖုန္းေခၚၿပီး ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးေနၾကျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားတာပါ။
ဒီႏွစ္မွာလည္း ခါတိုင္းႏွစ္ေတြလိုပဲ ဖုန္းမ်ားဝင္မလားဆိုၿပီး ႐ူးေၾကာင္ေၾကာင္နဲ႔ ထိုင္ေမၽွာ္ေနမိေၾကာင္းနဲ႔ Happy Birthday Mommy ဆိုတဲ့ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းသီခ်င္းေလးနဲ႔ သူမကို ဦးဦးဖ်ားဖ်ားႏႈတ္ဆက္ေလ့ရွိတဲ့ သားရဲ့ အသံကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ကစၿပီး မၾကားရေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျဖမဆည္နိုင္ေအာင္ ဝမ္းနည္းေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝထဲကေန အၿပီးပိုင္ထြက္ခြာသြားတဲ့ သားေလးကို တစ္ေန႔မွ ေမ့မရဘဲ လြမ္းဆြတ္သတိရေနၿပီး ရင္ေတြ ကြဲေၾကေနရသလို ခံစားေနရေၾကာင္း ေရးသားထားပါေသးတယ္။
ဒီႏွစ္မွစၿပီး ေမြးေန႔ဆိုတာ အဓိပၸာယ္မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ ဘာမွလုပ္ျဖစ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ ေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
လျပည့္ကဗ်ာရဲ့ Facebook အေကာင့္မွာလည္း တစ္ခ်ိန္က အေမ့ရဲ့ေမြးေန႔ကို မိသားစုစုံစုံလင္လင္နဲ႔ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ေလးကို ျပန္လည္ေဝမၽွၿပီး ” အရင္လို လူမစုံေတာ့တဲ့ေမြးေန႔မို႔ Happy Birthday လို႔ေတာ့မေျပာေတာ့ပါဘူးမေပ်ာ္ဘူးဆိုတာလဲသိလို႔ ေမႀကီး က်န္းမာပါေစလို႔ပဲဆုေတာင္းေပးေတာ့မယ္ေနာ္ ” ဆိုၿပီး မိခင္ျဖစ္သူကိုေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြလည္း အမွတ္တရအေနနဲ႔ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈနိုင္ေစဖို႔ ေရမြန္ရဲ့ ေမြးေန႔ဆုေတာင္း ဗီဒီယိုဖိုင္ေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ရပါတယ္။
နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို အဖိုးအဖွားအယောက်(၁၀၀)ကို ဆေးဖိုးထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ ကြိုးစားရင်း အာဆီယံသိက္ခာကို ဖြိုလှဲမယ့်
ခြေထောက် မသန်စွမ်းသူတွေရဲ့ အခက်အခဲကို စာနာစိတ်ဖြင့် အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းပေးခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ